General - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Nri a na-ahụkarị nke Seville
Gastronomy Spanish na-atọ ụtọ ma dị iche iche, yabụ n'agbanyeghị ebe ị na-aga, ị ga-eri ihe ịtụnanya. Ọ bụrụ na, ka ihe atụ, ị na-aga maka ije na gburugburu Ọ bụrụ na ị na-aga Seville, echefula na-agbalị kasị ahụkarị efere nke ya na-atọ ụtọ na iche iche gastronomy: azụ, ejula, legumes, sausaji na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ụdị cheese French kacha ewu ewu
France na chiiz bụ otu ihe. Mpaghara nke ọ bụla nke mba ahụ nwere chiiz ma ọ bụ chiiz nke ya, yana enwere ihe dị ka chiiz 240 enwere ike ịhụ n'ozuzu ya Chọpụta ụdị ọmarịcha ụdị chiiz French a ma ama: Roquefort, Brie, Reblochon na ọtụtụ ndị ọzọ.
Akụkọ banyere Alhambra
Akụkọ banyere Alhambra. Chọpụta akụkọ ifo ndị soworo na ọmarịcha ihe ncheta nke Granada, kwuputara saịtị ihe nketa ụwa.
Omenala nke mpaghara Amazon
Omenala nke ógbè Amazon gụnyere ma nkwenkwe okpukpe na ụzọ ndụ nke ebo ndị bi na ya. Chọpụta ha.
Ma mgbe ị na-eche na ụwa bụ ebe a na-ahụkarị karịa ka ọ dị n'oge ndị ọzọ, ị ga-achọpụta na ọ bụghị, na a ka nwere omenala, omenala, ihe ndị na-agbaji efere, bepụ mkpịsị aka, na-atụba tomato, oroma ma ọ bụ cinnamon, na-emegharị okpokoro isi ịnyịnya. , ụmụ ọhụrụ na-awụlikwa elu... ị maara omenala ndị a dị egwu?
Nri Spanish a na-ahụkarị dị ka omelette nduku, paella ma ọ bụ stew agwa Asturian bụ ndị ama ama n'ụwa niile. Kpebisie ike ịnụ ụtọ ha.
Naturism: kedu ihe ọ bụ
Anyị niile na-aga n'ụlọ gba ọtọ n'oge ụfọdụ ma ọ bụ yipụ anyị uwe ịsa ahụ na ọdọ mmiri, na anyị na-echeta na iju na obi ụtọ mmetụta nke Naturism bụ ihe karịrị ịga ije gba ọtọ n'akụkụ osimiri, ọ bụ ụdị ndụ onye ọ bụla nwere ike ịgbaso.
Omenala Switzerland sitere na ndụ ọha mmadụ ruo n'ịrụ nka site na mmemme na gastronomy. Na-amaja ịchọpụta ha
Ụdị nri German a na-ahụkarị
Germany bụ obodo gọọmenti etiti nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite, yabụ nri ya na-ekpughere njem ọdịnala a. Ọ bụghị ama dị ka French, German nri bụ ihe karịrị soseji na biya, ya mere jikere na-agbalị ọzọ flavors na ee, nakwa a otutu biya.
Omenala ndị England dị ka Boxing Day ma ọ bụ mgbanwe nke onye nche na Buckingham ga-eju gị anya. Amaja ịga ebe ahụ ma nwee mmasị na ha
Nri a na-ahụkarị nke Japan
Ahụrụ m nri ndị Japan n'anya, ọ bụ ihe na-atọ m ụtọ nke ukwuu mgbe ọ bụla m na-eme njem na, ruo oge ụfọdụ ugbu a, n'obodo nke m. Ma ọ bụ na ị na-agba ọsọ, ị maara nri ndị Japan kacha mma: sushi, ramen, soba, okonomiyaki, shabu-shabu, oinigiri ...
Senegal bụ obodo dị na ọdịda anyanwụ Afrịka ma mara ya dị ka "ọnụ ụzọ kọntinent Africa". Ọ bụ obodo mara mma, nke nwere ọdịdị dị iche iche ma mara omenala na omenala Senegal.
Greece bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kacha ewu ewu n'ụwa. E kwuwerị, ọ bụ ebe obibi nke ọchịchị onye kwuo uche ya nke ọdịda anyanwụ nke oge a ma ị ka na-achọpụta omenala Gris: ihe ị ga-eri, ihe ezinụlọ dị ka, ọrụ, nkà ...
Oge ezumike dị oke mkpa n'ihi na ọ bụ oge ahụ di na nwunye na-enwekarị ahụ iru ala ma nwee ike nweta ntakịrị udo n'ikpeazụ. Nke ahụ bụ America, Eshia, Africa ma ọ bụ Europe ... kedu ebe ị ga-achọ ịga ezumike ezumike?
Omenala ndị Itali
Chọpụta omenala Italytali, ndị na -akpụzi agwa ndị bi na ya ka oge na -aga.
Omenala nke Germany
Germany nọ n'etiti Europe na mgbe Russia gasịrị ọ bụ mba nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na kọntinent ahụ, yana nde mmadụ 83. Chọpụta ihe ọdịbendị German dị, ihe ndị mmadụ dị, omenala ha, ọdịnala ha
Omenala nke Egypt
Egypt bụ obodo ndị Alakụba, yabụ ọ dị mma ịmara ihe ole na ole gbasara ọdịbendị tupu ị mee njem. Otu esi eyi uwe, ka esi ekele, ka esi akpa agwa.
Rome bụ otu n'ime obodo kachasị ịtụnanya na Europe. Ahụrụ m obodo a n'anya, ọ nweghị ike ịka mma karịa, nwee ọdịbendị ọzọ, na -adọrọ mmasị ... Ọ gaghị ekwe omume Tupu ị gawa Rome mara ntakịrị ihe gbasara ọdịbendị ya, akụkọ ihe mere eme ya, nri ya, mmemme ya na ọdịnala ya.
Mụta maka akụkọ ihe mere eme nke mpaghara mpaghara Galician, uwe ọdịnala nke ndị ọrụ ugbo nke narị afọ nke iri na asaa ma na -adịkwa taa.
Chọpụta nri Aguascalientes na -ahụkarị, njikọta ọdịnala nri nri n'akụkụ ndị ọzọ nke Mexico na nri afọ.
China bụ obodo mara mma nke nwere narị afọ iri, ọgaranya na ọdịbendị dị iche iche. Ọ dị ka ụwa dị iche, nwere asụsụ ya, mmemme ya, zodiac nke ya, ọdịbendị China ya bara ụba, dịgasị iche iche, na -atọ ụtọ, na -atọ ụtọ. Omenala ha, mmemme ha, nri ha, egwu ha ... ọbụlagodi zodiac!
Anyị na -agụ "Mpaghara Andean" ma anyị na -eche maka South America na ọtụtụ mba, mana n'eziokwu, akọwapụtara nke ọma, ọ na -ezo aka na otu mpaghara mpaghara eke isii. . Chọpụta ụdị ejiji ha!
Uwe a na -ahụkarị na -akọwa omenala, ọdịnala, ihe niile metụtara ala na ndị ya, ọdịbendị ya, okpukperechi ya, gastronomy, ya Ekike ndị a na -ahụkarị nke Oaxaca bụ ukwe agba na ọ joyụ. Akwụsịla ịmara ha.
Meksiko bụ obodo nwere omenala dị iche iche nwere ọdịnala kemgbe ọtụtụ narị afọ. Otu n'ime mpaghara mara mma ya bụ Chiapas, na ndịda ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Ọ nwere ọkara nke ya Ọ bụrụ na ọ nwere uwe mara mma na nke na -atọ ụtọ bụ ụdị ejiji Chiapas, "chiapaneca". Ma ọ bụghị naanị ya!
Uwe ejiji nke obodo ọ bụla ma ọ bụ mpaghara ọ bụla n'ime obodo na -agwa anyị gbasara ókèala, omenala na omenala ya. Ma mgbe mmadụ na -ekwu maka ụdị ejiji Nicaragua na -agba egwu na egwu ọdịnala ha, yabụ jikere maka ụwa nwere agba mara mma na ọ joyụ.
Obodo ọ bụla ma ọ bụ mpaghara ọ bụla n'ime obodo nwere uwe ejiji, akwa ọdịnala nke jikọtara akụkọ ifo ya, ya bụ, ngosipụta nke ọdịnaala. Mụta maka ụdị ejiji Venezuela na ọdịiche ya niile, mpaghara site na mpaghara.
Omenala ndị Spain
Obodo ọ bụla nwere omenala ha, nke sitere na oge gafere, ndị obodo ya, ala ya. Kedu ihe bụ omenala ndị Spanish dabara adaba? Ị maara ọdịnala ndị Spain kacha ewu ewu? Flamenco, ọgụ ehi, oriri, oriri, kedu ka agbamakwụkwọ dị, ihe na -aga ụlọ mmanya na tapas ...
Ọsọ ịnyịnya Sanlúcar
Ọsọ ịnyịnya Sanlúcar bụ ihe ngosi dị iche nke na -ewere ọnọdụ na gburugburu ebe obibi mara mma na ihe ùgwù
Ememe asaa n'ọnwa Ọgọst na Spain nke ị na -agaghị agbaghara
Anyị na -atụ aro ememme Ọgọstụ asaa na Spain nke ị na -agaghị agbaghara. N'ime ha, Ndapụta nke Sella, La Paloma ma ọ bụ ngosi Malaga
Mexico bụ mba nwere ụdị ọdịbendị kachasị ukwuu na America, yabụ, ọ nwere oke osimiri nke ọdịnala na -atọ ụtọ ma na -achọ ịmata ihe. Fọdụ emeela agadi, ndị ọzọ Daybọchị Ndị Nwụrụ Anwụ, Virgin nke Guadalupe, Veracruz Carnival, ndị mariachis, posadas ... mara ọdịnala ọdịnala Mexico niile!
Mayanas bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ma na-atọ ụtọ nke ụwa ochie. Kesaa ọtụtụ akụkụ nke Central America, ruo ọtụtụ puku afọ. Have chetụla echiche otu ndị Mayan oge ochie si eji ejiji? Ha na-eyi sket, akpụkpọ ụkwụ, ákwà isi, uwe elu mara mma, na ọtụtụ ábụbà.
Akụkọ banyere akụkọ banyere Canarian sitere n'ike mmụọ nsọ Guanche, mana ha na-ekwukwa banyere agwaetiti ndị pụtara na-apụ n'anya dị ka a ga-asị na anwansi
Sarafan, poneva, kaftan, bụ aha ụfọdụ ejiji ndị Russia, ihe nketa nke ọdịbendị ọdịbendị nke ndị Europe oge ochie a.
Akụkọ ifo ndị Mexico
Akụkọ ifo ndị Mexico, nke na-azaghachi na njikọ nke ọdịbendị Columbian na European, mejupụtara agbụrụ agbụrụ
Uwe eji ejiji ndi Japan
Japan bụ ụlọ m nke abụọ. A nọrọ m ebe ahụ ọtụtụ oge, enweghịkwa m ike ichere ka nrịanrịa a kwụsị iji laghachite. Ahụrụ m mba a n'anya, ndị ya, gastronomy ya na Kimonos, obis, yukatas, geta akpụkpọ ụkwụ? Gini k’imaara banyere uwe ndi Japanese?
Akụkọ banyere Prague Astronomical Clock
Prague Astronomical Elekere bụ ihe pụrụ iche n'ụwa, anyị ga-agwa gị akụkọ mgbe ochie nke ọrụ nka a dị ịtụnanya.
Omenala iri kachasị dị egwu n'ụwa
Ihe kachasị mma maka ịgagharị bụ ịmata ọdịbendị na ọdịnala ọhụrụ.
Yukatán eji ejiji
Dị ejiji nke Yukatán bụ nsonaazụ nke ọdịiche n'etiti ndị amaala na ndị Hispaniki. A na-ebu ya n'oge jaranas, egwu egwu ọdịnala nke mpaghara ahụ
Omenala na Omenala nke United States
Omenala na ọdịnala nke United States gụnyere ezumike dịka Ekele ma ọ bụ Daybọchị St. Patrick.
Ihe nkiri ị ga-ekiri tupu ị gaa Paris
N'ime ihe nkiri ị ga-ahụ tupu ị gawa Paris bụ 'Marie Antoinette', 'Les Miserables' ma ọ bụ 'The Hunchback nke Notre Damme'.
Akụkọ banyere Galicia
Akụkọ banyere Galicia dị ọtụtụ ka ha mara mma ma na-azaghachi ọgaranya na akụkọ ifo nke ala Breogán
Ahụkarị nri nke Veracruz
Dị nri dị iche iche nke Veracruz na-agwakọta ihe kachasị mma nke mkpụrụ ala ala na ngwaahịa ndị si Spain na mmetụta ndị Africa.
Ahụkarị Jalisco uwe
Uwe a na-ahụkarị nke Jalisco nwere njikọ na ọdịnala nke charrería na mariachi. Ya mere, ọ na-anọchite anya ezigbo ndị Mexico.
Akụkọ banyere Rome
Akụkọ banyere Rome dị ọtụtụ nke na ha na-ezo aka na ntọala nke obodo ahụ na afọ ndị mbụ ọ dịrị.
Egwuregwu ndị a na-agbakarị na mpaghara Caribbean
Egwuregwu ndị a na-agbakarị na mpaghara Caribbean nwere mkpụrụ atọ: ụmụ amaala, nke si Spain na nke si Africa.
Nri Mexico bu ihe omuma mmadu nke mmadu. Anyị na-egosi gị ụdị nri asaa nke Mexico ị ga-anwale.
Ihe nkiri kachasị mma ị ga-ekiri tupu ị gaa Rome na-enye gị echiche nke ga-abịa kemfe na njem gị gaa Obodo Ebighị Ebi.
Akụkọ banyere Seville dị ọtụtụ ma na-ezo aka n'akụkọ ọdịbendị na-emeghị eme mgbe ochie nke bi na ọmarịcha obodo Andalusia.
Akwụkwọ 10 kachasị maka ndị njem
Gụ banyere ebe dịpụrụ adịpụ na mbara ala bụ ụzọ dị mma iji gbuo ahụhụ ahụ, echefula ndụmọdụ anyị!
Typicaldị ejiji nke Veracruz
Typicaldị ejiji nke Veracruz na-ejikọta autochthonous na nke si Spain. Ọ na-anọchi anya nke kachasị ọcha na maka akwa ya dị mfe.
Tenerife nudist osimiri
Anyị na-agwa gị nke bụ osimiri kacha mma nudist n'àgwàetiti Tenerife na ihe ọdịdị ala ya na-enye gị.
Anyị na-ekwu maka ọmarịcha amara nke ụgbọ mmiri Mediterranean, nke na-enye anyị njem njegharị dị iche iche.
Olee otú ndị ọnụ ọgụgụ ndị na Portugal
Anyị na-agwa gị ụfọdụ nkọwa iji mụta otu esi akwụ ụgwọ ụtụ na Portugal, nkọwa dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị agaa mba Portuguese.
Anyị na-agwa gị ihe njem egwuregwu bụ, ụdị njem na-eto eto na nke a ga-eme n'ọtụtụ ebe.
Omenala nke China
Anyị ga-ekwu maka ụfọdụ ọdịnala na-atọ ụtọ nke China, mba nwere ọdịnala oge ochie nke nwere ọtụtụ ihe.
Otu esi eji ejiji na Morocco
Anyị na-agwa gị otu ị ga-esi jiri ejiji na njem nleta na Morocco, ịmara ntakịrị ihe gbasara uwe ha.
Uwe ndị India
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara uwe eji achọ mma na nke ọdịnala na India iji mụtakwuo banyere ọdịbendị ya.
Anyị na-agwa gị ihe bụ ụdị njem na Spain ka ị mara ihe nke gị nwere ike ịbụ.
Oriri nke Patios nke Córdoba
Ememe patios nke Cordoba bụ asọmpi mara mma nke oghere ndị a nke ụlọ ndị mara mma.
Anyị ga-ekwu maka ụfọdụ ọdịnala kachasị mma na Ireland iji mara ebe njedebe a dị ntakịrị karịa.
Anyị na-ekwu maka isi ebe ndị njem na South America, yana ebe ndị dị mkpa iji gaa.
Osimiri kacha mma na Azores
Anyị na-ekwu maka ụfọdụ ụsọ osimiri kachasị mma n’agwaetiti Azores, bụ nke pụtara ìhè maka oke mma ha.
Agwaetiti kacha mma na Gris
Anyị ga-ekwu maka agwaetiti ndị mara mma na Gris, ebe ndị nwere ọmarịcha njem nleta nwere ọtụtụ amara.
Anyị na-ekwu maka ogige kachasị mma ise na Catalonia, nnukwu ebe obibi maka ezumike ezumike gị ọzọ.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na oke osimiri mara mma nke Oyambre na Cantabria na mpaghara ya dị nso.
Ihe ị ga-ahụ na agbataobi Cimadevilla
Anyị na-agwa gị ihe a ga-ahụ na ama ama Cimadevilla na Gijón, agbata obi ya kacha ochie.
Cala Llombards na Mallorca
Anyị na-enye gị ndụmọdụ banyere ihe ị ga-ahụ na Cala Llombard, na agwaetiti Mallorca, yana ebe ndị dị nso.
Argoitia, ntọala maka 'Aha asatọ Basque aha', adịghị. Iji mepụta ya, eburu akụkụ nke obodo dịka Zarautz, Zumaya ma ọ bụ Guetaria.
Faedo onye Ciñera
Anyị na-ekwu maka Faedo de Ciñera, ọmarịcha ọhịa beech nke dị na León nke nwere ama mara mma.
San Miguel de Escalada bụ otu n’ime ihe ịtụnanya dị na Spanish tupu Romanesque. Nwere ike ịga leta ya na obodo Gradefes, mpaghara nke León.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na Leon fjords, ebe mara mma nke ukwuu na Castilla y León.
Anyị na-agwa gị ihe a ga - ahụ ma mee na Dunas de Liencres Natural Park na obodo Cantabria.
Osimiri kachasị ogologo n'ụwa
Ekwenyerela na Osimiri Naịl a na-akọ akụkọ kacha ochie n'ụwa, mana ọ bụrụ na ọ bụghị ...
Leon ụlọ mbikọ
Parador de León ma ọ bụ Convent nke San Marcos bụ ọla ụkpụrụ ụlọ nke ị ga-eche na a ga-ebuga gị oge gafere.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na mpaghara Ọzara Sahara, ebe nwere oke ala na ọdịnala na-adọrọ mmasị.
Mara mma osimiri nke Huelva
Anyị na-ekwu maka nke kachasị mma osimiri dị na Huelva, ebe aja nwere ọtụtụ ihe nkiri maka ndị njem.
Temple nke Luxor na Egypt
Anyị na-agwa gị nkọwa niile gbasara ụlọ nsọ Luxor a ma ama na Egypt, ụlọ nsọ nke Thebes oge ochie.
Ihe ị ga-ahụ na Sanlúcar de Barrameda
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe ị ga-ahụ na Sanlucar de Barrameda, tinye ọkwa a ka ị chọpụta ihe nzuzo niile ọla ọla a nke Cádiz na-ezo.
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ na Château de Chambord dị na Loire Valley na France.
Obodo kachasị mma na France
Anyị na-egosi gị ndị bụ obodo kachasị mma na France na ndepụta nke ebe anyị kwesịrị ịga.
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee na mpaghara Champs Elysees nke Paris.
Ọ bụghị ọtụtụ ndị njem na-anwa ịga njem na Chad. Esemokwu na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu emeela ka njem ghara ị ...
Ihe ị ga-ahụ na mpaghara Montmartre na Paris
Anyị na-agwa gị nke bụ isi ihe nwere mmasị na mpaghara bohemian Montmartre nke Paris.
Plovdiv, ihe ị ga-ahụ na obodo a nke Bulgaria
Anyị na-agwa gị ihe bụ isi ihe mmasị na obodo Plovdiv, nke abụọ kachasị mkpa na Bulgaria.
Ka ị ghara ichefu nkọwa ọ bụla nke mpaghara ahụ, m ga-enye gị na nke a na ndepụta nke ebe kachasị mma ịga leta Cuzco.
Lausanne, dị mkpa na Switzerland obodo
Anyị na-ekwu maka ụfọdụ ebe dị mkpa iji gaa na obodo Switzerland nke Lausanne.
Anyị na-ebi na a iche iche ụwa na ọ bụ na di iche iche na-eme ka anyị na-akpali dị ka a umu. Taa, anyị ga-ahụ ...
Oke Osimiri Baltic
E jiri ya tụnyere mmiri na-ekpo ọkụ ma jupụta na Oke Osimiri Mediterenian, Oké Osimiri Baltic nwere ike iyi ihe oyi, dị anya na ...
Anyị na-egosi gị ihe a pụrụ ịhụ na obodo Baiona, ọmarịcha ebe dị na Rías Baixas na Galicia.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na Santo Domingo, ya na oghere ndị sitere na ya yana mpaghara colonial dị mkpa.
Arctic Circle bụ ebe kachasị na-amaghị nwoke nọ na mbara ala. Oge oyi na-adigide mgbe niile n'agbanyeghị agbanyeghị ...
Bari bụ a mara mma obodo na ndịda Italy na-enye gị a ebube monumental nketa, ezigbo ihu igwe na nke kacha mma gastronomy.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na obodo Poland nke Katowice na mpaghara Silesia.
Anyị na-agwa gị ihe ị nwere ike ịhụ na agwaetiti Shetland dị ịtụnanya na mgbago ugwu Scotland, ezi paradaịs.
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ ime obodo n’ime obodo gbahapụrụ agbahapụ
Orkrụ ọrụ ime obodo bụ ụzọ ọhụrụ iji weghachite ndụ n’obodo ndị a gbahapụrụ agbahapụ. Aga m agwa gị ihe ọ bụ na otu ị ga - esi guzobe ọrụ gị n'ime ime obodo.
Ebe: United Arab Emirates
Ruo oge ụfọdụ, na Middle East, ike apụtawo nke akụ na ụba ya sitere na ọla edo anyị ...
Ebube Georgetown kewapụrụ na etiti Washington na ọtụtụ afọ ọ bụ ebe obibi ndị nnọchi anya ya na ...
Anyị ga-achọpụta ihe anyị nwere ike ịhụ banyere mmasị na obodo Trieste nke Italiantali, yana mpaghara akụkọ ya.
6lọ nkwari akụ 2022 kacha mma na Copenhagen na 10. Chọta ụlọ nkwari akụ XNUMX kachasị ọnụ ala dị nso na etiti obodo.
Fuciño do Porco na Galicia
Anyị na-agwa gị ihe gbasara mara mma mara mma nke a maara dị ka Fuciño do Porco nke dị na Lugo mariña na Galicia.
Oké Osimiri Sargasso, oké osimiri na-enweghị ụsọ osimiri
Nke ahụ dị mma, Oké Osimiri Sargasso bụ naanị oké osimiri nke na-enweghị ụsọ mmiri ọ bụla, mmiri ya anaghị asa ahụ ...
Emi odude ke district Carabanchel bụ nnukwu ụlọ ahịa na Madrid: Islazul. Paradisezụ ahịa paradaịs ...
Anyị na-agwa gị ihe ị nwere ike ịhụ ma mee na obodo India nke Benares, were dị ka obodo dị nsọ.
Anyị na-agwa gị banyere akụkọ ihe mere eme nke Wewelsburg Castle na Germany, ebe akụkọ.
Onye isi obodo Plaza nke Salamanca
Anyị ga-ekwu maka Plaza Mayor nke Salamanca, akara nke obodo ahụ na ọmarịcha ụkpụrụ ụlọ mara mma.
Mba kachasị ukwuu n'ụwa
Enwere mba 194 ugbu a n'ụwa nke UN nakweere na gọọmentị nke ha na nnwere onwe zuru oke, ...
Arguineguín na-enye gị ọmarịcha osimiri, ogige ntụrụndụ, ihu igwe mara mma n'afọ niile ma nwee ọmarịcha nri Canarian.
Anyị na-ekwu maka ogige ogige Santa Claus Village, nke dị na Finland, ebe Santa Claus bi.
Ihe ị ga-ahụ na Eguisheim, Alsace
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ n’obodo Eguisheim, nke dị na mpaghara Alsace na France.
Site na ihe karịrị 5.000 afọ nke akụkọ ihe mere eme, obodo Sevillian nke Carmona bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ...
Columbretes agwaetiti dị kilomita 56 site na Castellón, bụ otu n'ime ebe Oke Osimiri Mediterenian nwere ...
Széchenyi Spa na Budapest
Anyị na-ekwu maka Széchenyi Spa mara mma n'obodo Budapest, otu n'ime ụwa kachasị ukwuu.
Obodo nke Cádiz
Anyị na-egosi gị ụfọdụ n'ime obodo ndị dị na Cádiz nke ị na-ekwesịghị ịhapụ, juputara na ụlọ ọcha, ihe nketa na oghere ndị ọzọ.
Kemgbe afọ 2007 enwere 7 ebube ọhụụ nke ụwa ọhụụ ahọpụtara n'ọtụtụ nyocha ụwa karịa 90 ...
Fall bụ otu n'ime oge kachasị mma iji gaa. Ọnọdụ okpomọkụ dị nro, ọnụ ahịa dị ọnụ ala ...
Black Lagoon nke Urbión
Itingga ebe ndị mara mma dị egwu bụkwa ezigbo echiche maka mgbapụ. Na nke a anyị na-ekwu ...
Anyị ga-ekwu maka nri kachasị ụtọ nke Basque gastronomy, lekwasịrị anya na azụ na ihe ndị dị mma.
Ọchịchọ nke China
China bụ otu n'ime mba kachasị amasị ụwa taa. Ọ bụghị na ọ bụghị tupu, kama n'oge ...
Mgbe ịga Thailand
Thailand bụ otu ebe kachasị mma maka ndị njem mgbe ị na-eme atụmatụ ezumike ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. A na-ewere ya dị ka ...
Ihe ị ga-ahụ na Balearic Islands
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na Balearic Islands, bụ ezigbo njem nleta na osimiri mara mma.
Romania, ebe ndị dị mkpa
Anyị na-agwa gị ebe niile nwere mmasị na Romania, yana obodo na ihe ncheta dị iche iche.
Stockholm bụ otu n'ime obodo kachasị mma na ịtụnanya na Europe. Na ihe ùgwù ọnọdụ ke agwaetiti guzobere ...
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịbụ na a ga-ahụ na obodo Marseille n'otu ụbọchị, na obere nleta.
Ihe ị ga-ahụ na Bern
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee na obodo mara mma nke Bern na Switzerland, yana obodo ochie mara mma.
Osimiri kacha mma na Spain
Anyị na-agwa gị nke bụ osimiri kacha mma na Spain, ụfọdụ nnukwu ụsọ mmiri nwere ike ịga leta.
Ihe ịhụ na New Mexico
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ ma gaa na New Mexico na United States of America.
Nkume nke Ifach
Otu n'ime ihe nnọchianya nke Costa Blanca bụ nnabata Peñón de Ifach, nnukwu nnukwu nkume nke ...
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na obodo Gengenbah na Germany, ezigbo ihe dị egwu.
Anyị na-ekwu maka ụfọdụ obodo kacha mma na Toledo ileta n'oge izu ụka ahụ.
Ihe omimi Triangle Bermuda
Ọ bụrụ na e nwere ihe omimi na ụwa nke sinima na telivishọn enyela nri na spades na afọ, na ...
Ihe ị ga-ahụ na Ghent
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ ma mee na obodo Ghent na Belgium, obodo jupụtara na akụkọ ihe mere eme.
Osimiri kacha mma maka nsị
Ọ bụrụ na ị bụ omiiko n'oké osimiri, ị ga-ekweta n'ezie ole na ole sensations hà ka nke ime ...
Combarro, obodo mara mma na Galicia
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na obodo Combarro, nke dị na mpaghara Galician Rías Baixas.
Obodo nke Malaga
A maara ógbè Malaga nke ọma maka Costa del Sol, maka osimiri ya na ala ya. Ma ihe ọzọ…
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na El Puerto de Santa María na mpaghara Cádiz.
Ihe ị ga-ahụ na Cascais, Portugal
Chọpụta ihe a pụrụ ịhụ n’obodo Portuguese bụ́ Cascais, nke dị kilomita ole na ole site na Lisbon.
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ na Latvia, obodo nwere oke osimiri, mpaghara okike na obodo mara mma.
Ihe ị ga-ahụ na Bergamo
Anyị na-agwa gị ihe niile a hụrụ na obodo Bergamo nke dị na Italy, na mpaghara Lombardy.
Anyị na-egosi gị ebe kachasị mma na Mallorca, obere paradaịs iji nwee ọ yourụ ezumike gị.
Otu n’ime steeti ndị mejupụtara United States bụ Florida. Ọ bụ steeti ebe ọtụtụ mmadụ bi na ọdịdị ala ya ...
Dabere na mpaghara Brugos, na ndagwurugwu nke osimiri Arlanza, otu n'ime mpaghara mmanya kachasị mkpa nke ...
Ime njem ime obodo na Spain
Anyị na-enye gị ọtụtụ echiche nke ebe ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ ime njem ime obodo na Spain.
Anyị na-agwa gị ihe a ga-ahụ na obodo Galizia nke Betanzos, na mpaghara A Coruña.
Ihe ịga leta Cagliari
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ ma gaa na obodo Italy nke Cagliari.
Tallinn, isi obodo Estonia
Ihe ị ga-ahụ n’obodo Tallinn, isi obodo Estonia, ya na obodo ochie ya mara mma, World Heritage Site.
La Palma, Agwaetiti Canary
Chọpụta ihe ị ga-ahụ ma mee na La Palma na Canary Islands.
Oge kacha mma iji gaa Japan
Maka ọtụtụ ndị mmadụ, ịgagharị na Japan bụ nrọ nke ndụ n'ihi na mba a dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ haswa nwere ...
Ihe ị ga-eme na Fuerteventura
Anyị na-agwa gị ihe niile enwere ike ime ma hụ na agwaetiti Fuerteventura na Canary Islands a ma ama.
Ihe ị ga-ahụ na Marseille
Anyị na-agwa gị banyere ebe ndị nwere mmasị na obodo French nke Marseille, obodo mara mma nke ọdụ ụgbọ mmiri dị na ndịda obodo ahụ.
Ihe ị ga-ahụ na Switzerland
Anyị na-agwa gị nke bụ isi ebe mmasị Switzerland, mba nwere ọmarịcha ọdịdị ala na obodo nwere ebe akụkọ ihe mere eme.
Ihe ị ga-ahụ na Croatia
Anyị na-agwa gị nke bụ isi ebe nwere mmasị na Croatia, ebe na-enye oghere okike na obodo ochie.
Colmar, gaa na ọla nke Alsace
Anyị na-egosi gị ihe niile enwere ike ịhụ na obodo French nke Colmar, obodo nwere obodo ochie mara mma na mpaghara Alsace.
Omenala Culinary nke France
Ọ bụrụ na enwere okwu na-ekwu, ebe ị gara ime ihe ị hụrụ, anyị nwekwara ike ikwu ebe ị na-aga eri ...
Gastronomy nke Austria: ụdị nri
Anyi n’egosiputa gi ihe eji acho nri nke ndi Austrian gastronomy, nri ndi n’acho igbali.
Ebe obibi ime obodo na Asturias
Chọpụta ụfọdụ obodo kachasị mma na Asturias iji nwee ọmarịcha ezumike ime obodo.
Ihe ịga leta na Sardinia
Anyị na-egosi gị nke bụ isi ihe mmasị na agwaetiti Sardinia na Itali, nwere oke osimiri mara mma na obodo ndị mara mma.
Ndụmọdụ maka njem mgbe Covid-19 gasịrị
Ọrịa na-efe efe nke Covid-19 kpatara emetụtala mpaghara ndị njem. Mmechi nke ókèala, ịkagbu nke ...
Ihe ị ga-ahụ na Slovenia
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ na Slovenia, juputara na obodo akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ oghere ndị mara mma.
Anyị na-agwa gị nke bụ osimiri kacha mma na Huelva na ụdị njirimara ha nwere ka ị nwee ike ịme ndepụta ma ọ bụrụ na nke a bụ ebe ị na-aga.
Ihe ị ga-ahụ na osimiri Sella
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ n'akụkụ Osimiri Sella na Asturias, otu n'ime osimiri ya kachasị mkpa.
Obodo kachasị mma na Seville
Anyị na-egosi gị ụfọdụ n'ime obodo kacha mma na Seville ileta, tinyere obodo ndị na-enye ihe nketa na oghere ndị ọzọ.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na ama ama Island Island n'ime obi nke Berlin, agwaetiti na ezigbo ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
Ihe ị ga-eme na Rothenburg
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na obodo German nke Rothenburg, obodo nwere ọmarịcha obodo ochie ochie.
Ogige ntụrụndụ mmiri na Catalonia
Anyị na-agwa gị nke bụ ogige mmiri kachasị mma na Catalonia, nnukwu ogige ndị nwere ebe ntụrụndụ na ebe ntụrụndụ.
Los Caños de Meca na Cádiz
Chọpụta ihe a pụrụ ịhụ n’obodo Los Caños de Meca dị na mpaghara Cádiz, n’ụsọ osimiri.
Ponta Delgada na Azores
Chọpụta ihe a ga - ahụ n’obodo Ponta Delgada, n’obodo Azores, nwere nka n’okporo ámá, ọmarịcha ụlọ na mbara ala.
Piazza Navona na Rome
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na Piazza Navona, otu n’ime akụkụ anọ nke obodo Rome.
Fatima ke Portugal
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ n’obodo Fatima dị na Portugal, ebe ị nwere ike ịchọpụta ebe ofufe na oghere eke.
Ihe ị ga-ahụ na San Sebastián
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na ọmarịcha obodo San Sebastián, ebe nwere ezigbo gastronomy yana ọdịdị ala ka mma.
Roque Nublo na Gran Canaria
Anyị na-agwa gị ihe a ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị gaa na Roque Nublo, bụ okwute nke dị n'etiti agwaetiti Gran Canaria.
Colossus nke Rhodes
Taa ụwa nke oge a ahọrọwo ihe ebube ya, mana n'akụkọ ihe mere eme, ebube nke ụwa ochie bụ ...
Rallọ ihe nkiri Cerralbo
Ebe obibi nke ụlọ obibi mara mma na nke etiti XNUMXth n'okporo ámá Ventura Rodríguez, Cerralbo Museum bụ otu ...
Chọpụta ihe ị ga-ahụ na Aqaba, Jọdan
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ ma mee n'obodo Aqaba na Jọdan, naanị otu nke nwere oke osimiri.
Gastronomy nke Japan
Gastroronomy nke Japan bụ otu ọkacha mmasị m. Enweghị m mmasị na obere ihe ma ana m agba onye ọ bụla ume ...
Omenala nri si Spain
Omenala nri nke Spain buru ibu, di iche iche ma dikwa nma nke ukwuu. Ihe mejuputara ya bu onyinye sitere na ndi ozo ...
Ihe ị ga-ahụ na Mycenae
Anyị na-agwa gị ihe niile anyị nwere ike ịhụ na saịtị ihe ochie nke Mycenae na Gris, yana ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
Na-eri nri na Lisbon
Anyị na-agwa gị ebe ị ga-eri nri na Lisbon yana kedu nri kachasị mma nke gastronomy Portuguese nke ị ga-anwale.
Ihe ị ga-ahụ na Conil de la Frontera
Anyị ga-egosi gị ihe niile a ga - ahụ ma mee na obodo Andalus nke Conil de la Frontera dị na mpaghara Cádiz.
Onye kacha mma nke Portugal
Anyị ga-egosi gị ihe kacha mma Portugal, mba jupụtara n'akụkụ nkuku.
Mba kachasị nwee ọnụ ọgụgụ mmadụ n'ụwa
N'oge a ọria na-efe efe, anyị chetara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ biri na mbara ụwa anyị. Ọ bụghị mgbe niile ka nke a, ...
Isi obodo Europe nke ị ga-agarịrị
Anyị na-agwa gị nke bụ isi obodo kachasị mma na Europe, ebe ụfọdụ anyị ga-eleta.
Anyị na-ekwu maka ụfọdụ ihe mmasị anyị nwere ike ịhụ n'ụsọ mmiri Italiantali, nnukwu mpaghara nwere oke ala.
Anyị ga-amata oke osimiri paradisiacal nke ụwa, nwere ọtụtụ oke osimiri kachasị mma ị gara na ụwa anyị.
Ebe obibi ndị mọnk nke Royal Barefoot
Minit ole na ole site na Puerta del Sol bụ ebe obibi ndị mọnk nke Royal Barefoot, ụlọ nke mputa ya ...
Mmiri mmiri Ézaro
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na otu esi enweta Osimiri Waterfall a ma ama nke Osimiri Xallas na Galicia.
Ebee ka New Zealand dị
New Zealand, otu n'ime ebe nwere ọdịdị kachasị ịtụnanya ma kachasị mma na mbara ala. Ọ bụghị ihe ndabara na ...
Ihe ị ga-ahụ na Archena, Murcia
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee n'obodo Archena na Murcia, ebe enwere ụzọ ụkwụ na ebe ngosi ihe mgbe ochie.
Ihe ị ga-ahụ na Burano
Anyị na-agwa gị ihe niile ị hụrụ ma mee na obere agwaetiti Burano, nke dị nso na obodo Venice na Italytali.
Ihe ị ga-eme na Hallstatt
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee na obere obodo Hallstatt nke dị n'akụkụ ọdọ mmiri dị n'Austria.
Dolọ ihe nkiri Prado
The Prado Museum bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa art veranda na ụwa na ndị kasị ama na Madrid. Ọ bụ…
Ihe ị ga-ahụ na Toledo
Anyị na-agwa gị ihe a ga - ahụ n’obodo Toledo, obodo ochie nke ị ga - ahụ ụdị ihe nketa na ụlọ dịka Alcázar.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na ogige mara mma Torres del Paine Natural Park nke dị na Chile, nwere ọdọ mmiri, ugwu na glacier.
Ọtụtụ ndị maara ọdọ mmiri San Juan dị ka osimiri Madrid. Ruo ebe a nke di 52 ...
Bárcena Onye isi obodo
Bárcena Mayor bụ obere obodo dị n'ime ime obodo Cantabria nke yiri ka agbanyeghị oge. Ọ na-enye gị ụzọ gasị ugwu, obi iru ala na gastronomy bara ụba.
Osimiri Cabo de Gata
Anyị na-ekwu maka osimiri kachasị mma na mpaghara Cabo de Gata dị na Almería, nwere ebe aja mara mma iji nwee ọ theụ n'oge ọkọchị.
Ọdọ mmiri Sanabria
Anyị na-agwa gị ihe ị nwere ike ịhụ ma mee na Lake Sanabria, ọmarịcha nleta iji nwee ọmarịcha ọdọ mmiri dị na Peninsula.
Anyị na-egosi gị ihe niile ị nwere ike ịhụ na nleta obodo Wroclaw na Poland, yana ụlọ ochie ya, akụkụ ya na katidral.
Aragonese Pyrenees, ihe ịtụnanya okike na ọtụtụ akụkọ ntolite
Aragonese Pyrenees bụ otu n’ime ebe ndị mara mma na Spain. Ọ na-enye gị ihe ịtụnanya sitere n'okike, obodo ndị mara mma na nri na-atọ ụtọ.
Ihe ị ga-ahụ na Mérida
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ na obodo Mérida, nke nwere ọtụtụ ihe mgbe ochie site n'oge Alaeze Ukwu Rom.
Anyị na-agwa gị ihe ị nwere ike ịhụ ma mee n'ụsọ osimiri Bolonia, ebe a ma ama nke ájá dị na mpaghara Cádiz.
Pau, akụkọ ndụ dị nso na Pyrenees
Pau, na France, bụ obodo jupụtara n’akụkọ ihe mere eme na nnukwu ihe nketa, mana ọ nwekwara ọmarịcha ala na ezigbo gastronomy.
Ihe ị ga-ahụ na Valderrobres
Anyị na-egosi gị ihe niile enwere ike ịhụ ma mee n'obodo Valderrobres dị na Teruel, obodo nwere ọtụtụ akụkọ ntolite.
Segura nke Sierra
Anyị na-agwa gị ihe niile a hụrụ na obodo Segura de la Sierra, nke nwere ọtụtụ akụkọ ntolite na ihe nketa n'okporo ámá ya.
Wine njem nlegharị anya na Spain
Ukọ nke osisi vaịn aghọọla nkà na Spain. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya, ...